Baro Qodobada Sida Fiican U Kobciya Jacaylka Lamaanayaasha | Hawraar
June 4, 2016 Xiisaha/Xulashada
Baro Qodobada Sida Fiican U Kobciya Jacaylka Lamaanayaasha
Wax sahlan ma’aha in la helo qoys isku faraxsan oo misna caafimaad qaba balse waxaa muhiim in la ogaado haddana in arrintaas la sameyn karo haddii lamaanuhu ay ka fikiraan.
Mucaashaqiin1.Xidhiidhka wada hadalka: Daraasad ayaa sheegtay in xidhiidhka wada hadalku uu ka muhiimsan yahay wax walba, iyadoo uu meesha ka saaro buuqa qoyska, waa hubaal in is qabadku uu ka dhex jiri karo qoysaska balse qoyska wanaagsan aad ayay u garanayaan muhiimadda wada hadalku leeyahay, iyadoo ay og yihiin in hadii laysku buuqo ama layslaayo aanay waxba ku soo kordhayn.
2.Jimicsi wada sameeya: Waxyaabaha keena farxadda iyo fayoobida qoyska waxaa ka mid ah inay hal meel ku wada qaatan jimicsiga, iyadoo arrintaan lafteeda ay abuuri karto qanacsanaan dhexdooda ah, waxaa kale oo ay kordhisaa dareenka.
Dalxiis ama safar: Waxaa la sheegayaa in safarka ama dalxiisku inuu qeyb weyn ka qaato farxadda iyo nolosha caafimaadka qoyska, iyadoo jaceyl badan la isku qaadayo marka dib loogu soo laabto guriga.
4.Qosolka: Horta qosolka ayaa raaxo u ah jidhka oo dhan, wuxuuna kordhiyaa difaaca jidhka. Qosolka iyo dhoollacaddeynta qofka waxay ka dhigaan mid wanaagsan xittaa haddii uu si qasab ah isaga keeno. Haddaba haddii qoyska ama mucaashaqiintu ay ku jiraan maalmo adag waxaa fiican in qosol la iska keeno xittaa mid bilaa sabab ah, jir ahaan iyo maskax ahaan ayaad u fiicnaaneysaan.
Isla cunidda raashinka: Sida caadada ah waxaa wanaagsan in qoysku marwalba ay raashinka isla cunaan, iyadoo miiska qadadu ay yahay goob ay ku xidhiidhaan qoysku oo ay ku kala war qaataan, iyadoo caafimaad ahaanta qoyskana ay u wanaagsan tahay sida qosolka, sheekada ka sokow nafqada iyo caafimaadka laga helayo raashinka la cunayo.
Waa in la isugu dulqaato isbeddelka jirka: Sida la og yahay lamaanuhu wey duqoobaan oo da’ ayaa timaada waayo horay ayay u soo qaateen nolol qurxoon sidaas darteed ma wanaagsana in la tilmaamo xubno jirka ka mid ah sida ‘Bidaar weyn, calool weyn Iwm’.
Halkan Ka Dhagayso Dhamaan Heesaha Xaliima Khaliif Magool
Halkan ka Dhagayso Heesaha Khadra Daahir
KAMACE RAAS WEYN NEW VIDEO 2018 HD
MUSTAFE OOMAAR JACEYLKU MA HAWL YAROO 2018 HD
ISMAHAN MABSUUD RAGA DIBADA JIRA NEW VIDEO 2018 HD
KAMACE HEES CUSUB (MALAB) SHOW LA CAWEE LIBAAXA 2018
MOH RASTO HEES CUSUB (DIBKA ISAAR) SHOW LA CAWEE LIBAAXA 2018
KHALID DHOOBOYARE HEES SHIDAN (QURUXDAADII KU QADAY DHEH) SHOW LA CAWEE LIBAAXA